Jurgen Klopp Oo Soo Bandhigay Hadalkii Uu Philippe Coutinho U Sheegay Kadib Heshiiskii Amaahda Ahaa Ee Uu Bayern Munich Ugu Biiray. - Gool24.Net
Jurgen Klopp Oo Soo Bandhigay Hadalkii Uu Philippe Coutinho U Sheegay Kadib Heshiiskii Amaahda Ahaa Ee Uu Bayern Munich Ugu Biiray.
September 8, 2019 Mahamoud Batalaale
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa soo bandhigay hadalkii uu u sheegay xidigii hore ee kooxdiisa Liverpool sida xun kaga baxay ee Philippe Coutinho kadib markii uu heshiiska amaahda ah ugu biiray kooxda Bayern Munich.
Philippe Coutinho oo sanad iyo badh ku soo qaatay Barcelona ayaa waji gabax kala soo laabtay Camp Nou wuxuuna maalintii suuqa xagaaga ugu danbaysay amaah ugu biiray kooxda Jarmalka ka dhisan ee Bayern Munich.
Jurgen Klopp ayaa wargayska dalkiisa Jarmalka ee Bild u sheegay hadalkii uu ku yidhi Philippe Coutinho markii uu maqlay in uu amaah ugu biirayay kooxda Bayern Munich.
Kadib qaab ciyaareed layaableh oo uu Liverpool ku soo muujiyay, Coutinho ayaa gabi ahaanba isku taaban kari waayay Barcelona wuxuuna qirtay in isaga laftiisu aanu filayn in xaaladu sidan ku noqonayso taas oo keentay in uu ka shaleeyay go’aankii uu Liverpool kaga baxay.
Klopp ayaa Coutinho ku sifeeyay xidig heer caalami ah wuxuuna xusay in markii uu maqlay amaahda uu Bayern Munich ugu biirayay ay layaab ku noqotay balse waxa uu ku adkaystay in uu noqon doono heshiis labada dhinacba u fiican.
Klopp ayaa Philippe Coutinho ka dhigay mid ka mid ah ciyaartoyda aduunka ugu fiican laakiin xidiga reer Brazil ayaa abaalkiisa xumeeyay kadib markii uu Reds ku qasbay in laga iibiyo Barca bishii January 2018 inkasta oo uu noqday heshiis uu ka qoomameeyay.
Jurgen Klopp ayaa wargayska Bild waxa uu u sheegay: “Waa ciyaartoy heer caalami ah, xaqiiqdii waa la wareegis u fiican Bayern Munich iyo Bundesliga”.
Klopp oo ka hadlaya sidii ay layaab ugu noqotay in Coutinho uu amaah ugu biiray kooxda Bayern Munich ayaa yidhi: “Waxaan filayaa in ay labadoodaba ku haboon tahay, markii ugu horaysay ee aan wax ku saabsan maqlay, waxaa laga yabaa in ay layaab noqotay, laakiin maanu haysan lacag ku filan si aanu isaga u helno”.
Intaas kadib Klopp ayaa sheegay in ay xili horeba isticmaaleen lacagtii ay Coutinho ka heleen markii uu Barca ku biiray wuxuuna soo bandhigay hadalkii uu Coutinho u sheegay markii uu Bayern Munich amaahda ugu biirayay.
Klopp oo arintan ka hadlaya ayaa yidhi: “Markaasba waxaanu isticmaalnay dhamaan lacagtii aanu isaga ka helay, waxaan haddaba isaga ka shaqsi ahaan ugu sheegay in isaga iyo Bayern ay isku haboon yihiin”.
In Jurgen Klopp uu shaqsi ahaan ula hadlay Philippe Coutinho markii uu dhawaan amaah ugu soo biirayay kooxda Bayern Munich ayaa muujinaysa sida ay labadoodu wali xidhiidh u sii lahaayeen.